Cabbiraadu waxay soo jeedineysaa 5 naqshadaynta qalabka sawiridda
Qalabka saarista sawirku wuxuu ka caawiyaa abuurista liisaska sawirada laga helo bogga loo qoondeeyey. Waxaad isticmaali kartaa qalabkan si aad u soo qaadatid sawirada oo aad ugu dhoofiso qaabka JSON. Qalabkani wuxu leeyahay xidhiidh macmiil leh, waana sahlan yahay in la isticmaalo. Waa inaad gelisaa URL ah website ah oo aad rabto inaad falanqayso oo aad ku dhufato badhanka "Submit". Qalabka saarista sawirada isla markiiba wuxuu soo qaataa waxoogaa oo wuxuu helayaa natiijooyinka aad doonaysid. Qaar ka mid ah noocyada ugu dambeeyay ee hoos ku xusan.
ExtractPDF waxay kaa caawineysaa inaad xoqdo dukumiintiyada PDF waxayna burburiyaan qaybo shakhsiyadeed: sawirada, qoraalka, xarfaha, iyo metadata. Waxaad xoqin kartaa websaydhyo badan oo aad rabto iyada oo aanad ku tashan tayada. Waa inaad gelisaa URL-ka oo aad u sheegtaa ExtractPDF inay xoqdo xogta
Konwerter waa sawir kale oo weyn oo sawir leh oo xajinaya sawiradaada. Qalabkani wuxuu u fiican yahay ganacsatada iyo ganacsatada. Waxaad xoqin kartaa faylasha BMP, GIF, JPG iyo PNG adigoo isticmaalaya qalabkan. Waa inaad kaliya muujisaa xogta oo riix badhanka "saarista" si aad u bilowdo xoqitaan. Marka Konwerter la sameeyo qashin, waxaad ku soo dhejin kartaa xogta qaab la jecelyahay.
SmallPDF waa nooc ka mid ah qalabka saarista sawirada. Waxay leedahay interface-user friendly-ka waxayna xoqin kartaa sawirrada badan ee aad rabto. SmallPDF ma aha oo kaliya xayiraan faylasha JPG iyo PNG laakiin waxay sidoo kale ka dhigayaan xogta dukumintiyada PDF. Macluumaadka waxaad ku heli kartaa qaab la aqrali karo oo la iskudhin karo waxaana laga dhalin karaa internetka. Markaad geliso URL ama sawir muuqaal ah, waxaad ku qasban tahay inaad gujiso "Scric" badhan oo u ogolow qalabkani inuu guto hawshiisa.
PDF Online waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee wax soo saarka muuqaalka. Waxay ku siisaa sawirro tayo sare leh waxayna xoqdaa tiro badan oo bogag leh oo sahlan. Dhibaatada keliya ayaa ah in qalabkan uu xoqin karo ilaa seddex sawir. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan u adeegsan karin mashaariicda waaweyn oo ay tahay inaad iibsato qaybta caymiska. PDF Online uma baahnid in la soo dejiyo oo shaqeyn kara hawlaha akhbaaraadkaaga internetka. Waa barnaamij dhammaystiran oo lagu kalsoon yahay, oo ku habboon ganacsiyada, barnaamijyada, calaamadaha, khubarada IT iyo kuwa websaydhka.
PDFMate ayaa weli ah version kale oo cajiib ah oo ka mid ah qalabka saarista sawirada. Waxaa hadda la heli karaa dadka isticmaala Windows kaliya oo waxaa ugu fiican loo yaqaan interface interface-user. Iyadoo PDFMate, waxaad xoqin kartaa sawirro badan ama faylasha PDF sida aad rabto. Qalabkani wuxuu xitaa xayiraa xogta laga helo bogaga jaallaha ah, bogaga cad, forumyada wada hadalka iyo buug-yaraha internetka. Waxay xakameysaa faylasha PNG iyo JPG iyo sidoo kale software la isku haleyn karo.
Si loo helo qaab-u-raadin ku habboon raadinta, dhammaan sawiradu waa inay u cadeeyeen sifooyinka ALT. Sifooyinka waxay Google ku muujinayaan sawiradaada waxayna ku siinayaan fikrad ah nooca nuxurka aad daabacayso. Qaybaha kor ku xusan ee wax soo saaridda muuqaalka labaduba waa kuwo la isku halleyn karo oo sax ah. Waxay na siiyaan natiijooyinka layska rabo mana u baahnid koodh. Waxaad ka faa'iideysan kartaa barnaamijyadan soo saaridda sawirada sida barnaamij aan ahayn Source .